ULazaru Lagin - owanikela izingane isimangaliso
Nguye owabhala screenplays befilimu animated "Mayelana nosingamama omubi," "Isexwayiso, izimpisi!" Futhi abanye eziningana. Lena kusukela ipeni wakhe bephuma kumnandi amanoveli "Atava Proxima", "Isiqhingi wokukhungatheka", amanoveli kanye amapheshana. Nguye wacabanga Mayakovsky encwadini "Life edlule." Kodwa kubonakala sengathi ebaluleke kakhulu yomsebenzi wakhe, okuyiwona wabonwa futhi namanje uthando futhi khumbula, lena indaba indaba "The Old Man Hottabych". ULazaru Lagin wanikela lonke abafana namantombazane kweSoviet Union (kuze kufike abazali babo) ngenkolelo yokuthi izimangaliso akhona futhi izifiso ezithandwayo zezingoma kungenziwa wagcwalisa kungakhathaliseki ukuthi.
Ebuntwaneni futhi intsha
Ngo-1903, November 21 (4 Disemba) e emkhayeni wamaJuda nokuceba nesizotha kakhulu wazalwa umfana ngesikhathi sokuzalwa wanikwa igama uLazaru sika (njengomuntu omdala, wathatha mbumbulu uLazaru Lagin - kusukela amaqoqo lokuqala siqu igama labo nesibongo - uLazaru Ginsburg) . WayeyiZwi ngiyizibulo ezinganeni ezinhlanu ngoJosefa Hana Fayvelevicha Lazarevna Ginsburg. UJosefa wasebenza raftsmen. Ngonyaka esezele umndeni indodana yakhe, njengoba eseqongelele imali, wathuthela Minsk. Kulomuzi, upapa wavula esitolo sezinto zokwakha.
Umfana engu-10 kuphela ubudala, njengoba kweMpi Yezwe Yokuqala (ngo-1914), futhi ngemva kweminyaka emithathu nje kuphela - October Revolution (1917).
Lapho ngineminyaka engu-nanhlanu (1919) ULazaru Lagin kuphothula esikoleni esiphakeme e Minsk futhi wathola isitifiketi kamatikuletsheni, ithunyelwa kulwiwa njengesisebenzi sokuzithandela. Ngale nkathi ekuphileni kwakhe, uhlela iYoung Communist League e Belarus ngisho isikhathi esithile omunye umholi walo.
Man ekuseni waqala ukuloba, futhi kusukela 1922 izinkondlo zakhe namanothi kakade ukunyathelisa emakhasini amaphephandaba ahlukahlukene. Izinga lemigqa walo wawenziwe ngempela high, kodwa ... Njengoba indida kanye languid nombhali yena, uLazaru I., ukukhumbula imisebenzi yakhe yokuqala tetemibhalo, unesikhundla sokunconywa omkhulu ukuba izincwadi lakubo - wayeka ngesikhathi futhi imise emagama lanemisindvo lefanako phakade.
Ngesikhathi esifanayo, e Rostov-on-Don, ehlangana uVladimir Mayakovsky wambonisa inkondlo yami. I imbongi edumile wancoma umsebenzi Lagin. Ngemva kwesikhashana, lapho eseneminyaka e Moscow, emhlanganweni ngamunye kokubuza umbuzo wokuthi kungani Lazar Iosifovich ungethele kuye imigqa zabo ezintsha.
Ngonyaka olandelayo, umfana uqala izifundo zakhe eMnyangweni Minsk Conservatory vocal. Kuthatha isikhathi esincane kakhulu, futhi uyaqaphela ukuthi umculo theory akanandaba nhlobo. Ngakho-ke, lolu cwaningo luphela, anginaso isikhathi ukuze uqale ngempela.
Kutawufika lilanga lapho ethintwe enhlokodolobha - edolobheni laseMoscow - Lazar Lagin. Umlando wakhe is agcwaliswa yokuthi elandelayo - ephothula sikhungo ukuthi "Plekhanov" wabizwa ngokuthi esikhathini esizayo. Ngemva kokuthola iziqu uLazaru I. ukhonza ibutho. Akenzi ushiye ayecabanga ukufunda. Futhi ngemva kwesikhashana, kusukela ngo-1930 kuya ku-1933, lapho engena Institute of Red uProfesa, lapho bavikela mqondo yakhe futhi wathola PhD e Economics. Lagin wachitha isikhathi esithile e-Institute njengendlela womfundisi, ngisho kwaholela umsebenzi nokufundisa. Parallel kule, wakwazi ukubhala amapheshana ambalwa okukhethekile yakhe.
Ngemva kwesikhathi esithile, umsebenzi yathela impela ngaleso sikhungo aphazamisekile. ULazaru Lagin Ubuyise umsebenzi omusha, okuyinto kwahlongozwa ephephandabeni "Pravda". Ngemva kwesikhashana, usebenza ngokuthi "Ingwenya" magazini. Lapha kulapho ngo-1934 uba umhleli iPhini (intatheli eyaziwa Mikhail Koltsov).
Inkambu etemibhalo Lagin iqala njengoba imbongi Komsomol futhi satirist. Wanyathelisa incwadi yakhe yokuqala - "153 abazibulalayo." Vele ngemva kwalokhu uyaphuma ukuphrinta umsebenzi wakhe, uLazaru I. iba ilungu Writers 'Union. Kuyo le ncwadi ishicilelwe futhi omunye emaphamfulethi - ". Elixir sikaSathane" Eminyakeni yangemva kwempi, lokhu iphamfulethi wawujabulisa yesayensi inoveli "Patent AB". Nokho, ngemva kweminyaka emihlanu ekulesi iphephandaba "I-Komsomolskaya Pravda:" eshicilelwe Skit lapho kwasikiselwa ukuthi umbono inoveli wabolekwa noveli Aleksandra Belyaeva. Kodwa umsebenzi okhethekile baphetha ngokuthi umqondo womunye ayifakiwe.
Uneminyaka emingaki wazalwa Hottabych?
Ekupheleni namathathu banesifo esibi Lazar Lagin, incwadi yakhe ethi Sinesithakazelo esikhulu abafundi bobudala obungefani, njengasezulwini kwamaSoviet, futhi eminyakeni yamuva nje, kuhloswe ngaso umsebenzi yesikhathi eside on the esiqhingini Spitsbergen. Uma wafunda umsebenzi Thomas Anstey Guthrie "imbiza yethusi", nokuba ngaphansi kwethonya le ncwadi, e-Arctic waqala ukubhala indaba mayelana adventures umfana abavamile Wolken, abakuphila kwabo yasishintsha ngemva yamkhulula kusukela isibani magic Hottabych ubudala ngokumangalisayo .
Ekuqaleni, indaba indaba yanyatheliswa kuyi iphephandaba "Pioneer iqiniso" futhi "Pioneer" magazini. Kodwa njengoba incwadi indaba has iminyaka emibili kuphela kamuva, ngo-1940. Kuyathakazelisa ukuthi uhlelo lokuqala kwaba ephawulekayo sihluke eyalandela, lapho abafundi ungase uthole okuningi ngangokunokwenzeka ngo-1951. Iminyaka 11 izinhlamvu neziqephu ashintshiwe encwadini kukhona amakhasi amasha ezithakazelisayo. Umbhalo befilimu, okuyinto kuze kube yilolu suku ubumnandi alinganayo ukubukela kokubili abadala kanye nezingane, yabhalwa umlobi njengoba isikhathi esekelwe uhlelo lwesibili lwe-tale.
ULazaru Lagin beqaphile futhi unake isimo sezombusazwe kuleliya lizwe, okuyinto kushintsha njalo. Ngakho-ke, imithetho cishe njalo edition zamaqhawe akhe.
I ozithandayo kakhulu ucezu Lagin - inoveli "The Blue Man" Sitshela ngohambo kweSoviet Union kule kwamashumi amahlanu, le Tsarist Russia. Le ndlela ayilobayo iminyaka 7, abantu besikhathi akazange abe nomuzwa wokuthi ngempela yimpumelelo ngakho. Okuningi umjikelezo ezithakazelisayo ngokuthi "zindaba ezingamanga okuhlambalazayo" ukuthi Lagin wabhala kusuka 1924 kwaze kwaba sekufeni kwakhe. Ngaphambi kokuba baqede indaba yakhe futhi "Filumena-Filemoni".
Ngokwe-simo Lagin ngisho ikhathuni ambalwa isuswe.
Wathweswa iziqu kwasemhlabeni uPapa etemibhalo wizadi Hottabych Juni 16, 1979 eMoscow.
Indaba efingqiwe: "Lo Thorn Birds". Incazelo izingxenye
Le noveli "Scarlett": isifinyezo, ukubuyekezwa
Shintsha UMthetho eMoscow. Lapho ilungelo lokushintsha? Amalungelo yokufaka esikhundleni eMoscow
Izakhiwo kanye nezimiso nefilosofi
Indlela obumbene ukukhilosha washcloth - amathiphu wabaqalayo Needle abesifazane
Isixazululo seSofthiwe 1c Khokha & Abasebenzi - Usizo Oluhle Lwezinhlangano
Bhalisa SP Ltd. hhayi isakhamuzi eRussia futhi isikhungo lesifunda
Ukufunda Ulyanovsk. Museum of Aviation Civil
Sengqondo maqondana serfdom Famusov. NJENGOBA Griboyedov "Maye kusukela Wit"
Ukucabanga kwengqondo. Imidlalo yama-logic nokucabanga. I-Psychology
Irida Apartments 3 *. Crete amahhotela "zonke okufakayo". Greece, iholide eKrethe
Februwari 19: amasiko, izimpawu, nezinkanyezi ezihambelana nosuku lomuntu